Burundi: Daniel Ntiranyibagira waa ninki ugu horreeyey oo arag la’ oo imtixaanka dugsiga sare ee dalkaasi ka gudbo | Biyoguurenews.com
Home Wararka Burundi: Daniel Ntiranyibagira waa ninki ugu horreeyey oo arag la’ oo imtixaanka...
Burundi: Daniel Ntiranyibagira waa ninki ugu horreeyey oo arag la’ oo imtixaanka dugsiga sare ee dalkaasi ka gudbo
Daniel Ntiranyibagira oo ah nin arag la’ ayaa wuxuu noqday qofki ugu horreeyey oo taariikhda dalka Burundi ku guuleysta Imtixaanka dugsiga sare ee dalkaasi oo loogu gudbo heer jaamacadeed.
Daniel oo 40 jir ah wuxuu ka soo jeedaa Gobolka Kayanza oo ku yaalla waqooyiga dalka Burundi.
Wuxuuna Daniel uu waxbarashadiisa dugsiga hoose uu billaabay 1987-dii hase ahaatee isaga iyo 6 saaxibbadii ah oo arag la’ ayaa waxbarashadooda ku joojiyey fasalka lixaad, maadaamaa dalka Burundi uu ka jirin dugsi sare oo looga tala galay dadka aan wax arkin.
Muddo kaddib sanadka marka uu ahaa 2010-kii ayuu Daniel go’aansaday inuu dib ugu laabto waxbarashadiisa isaga oo wax la baranayey dadka caadiga ah ee aan aragga wax ka qabin.Wuxuuna sanadkan ku guuleystay Imtixaanka dugsiga sare ee lagu galo jaamacadaha, waana qofki ugu horreeyey oo dalka Ruwanda ka soo jeeda oo imtixaanka dugsiga sare ka gudbo.
Daniel Ntiranyibagira wuxuu casharrada waxbarashada dugsiga sare uu la qaadanayey ardayda caadiga ah isaga oo aan casharrada loo qoro ardayda aan awoodin inuu arko. Balse wuxuu sameeynayay marwalba oo uu cashar qaadanayo wuxuu fasalka la geli jiray qalab codka lagu duubo wuxuuna duuban jiray codka macallin kasta oo cashar bixinayo.
Gurigiisa marka uu ku noqdana wuxuu dib u dhageysanayey uuna u qoranayey sharraxaadda macallimiinta wuxuuna ku qoranayey Koombiyuutarkiisa Laptop-ka.Daniel xilliga casharrada cod ahaan uu u soo duubtay uu Koombiyuutarka uu ku roganayo cidna caawimaad ugama baahdo oo koombiyuutarka iyo isticmaalkiisa si wanaagsan ayuu u yaqaannaa oo isaga ayaa maamulanaya.
Daniel Ntiranyibagira waa uu ku guuleystay imtixaanka dugsiga sare ee dalka Burundi balse dhibaatada haysata ayaa waxay tahay jaamacadda uu geli lahaa oo uusan haysan.
Maxaa yeelay dalka Burundi jaamacadaha caadiga ah ee ku yaallo ma qaabilaan dadka aragga la’, mana jiraan jaamacado looga tala galay.
Wuxuu Daniel uu codsanayaa in laga caawiyo sidi uu u heli lahaa jamacad qaabisho si uu uga mira dhaliyo hamigiisa ah inuu waxbarashadiisa heer jaamacadeed uu sii wato.
Previous articleVOA Turkiga oo Aaminsan in Wariyihii Lawaayay ee jamaal shooqi Lagu Dhex Dilay Safaarada sacuudiga ee Turkigga ku taal
Next articleDaawo, Siyaasi Cabdilaahi Jawaan oo Si Adag Uga hadlay Arimaha Doorashooyinka Qabsoomidooda